Yohane 6 NA-TWI - Yesu ma nnipa mpemnum aduan - Eyi akyi, - Bible Gateway
Yohane 5Yohane 7
Yohane 6 Nkwa Asem (NA-TWI)
6 Eyi akyi, Yesu twaa Galilea po a wɔsan frɛ no Tiberia po no. 2 Esiane sɛ nkurɔfo hui sɛ Yesu nam anwonwa kwan so asa nnipa pii yare no nti, wodii n’akyi. 3 Yesu ne n’asuafo no kɔɔ bepɔw bi so kɔtenaa hɔ kakra. 4 Saa bere no na Twam Afahyɛ no abɛn. 5 Bere a Yesu twaa n’ani, hui sɛ nnipakuw no reba ne nkyɛn no, obisaa Filipo se, “Ɛhe na yebenya aduan ama saa nnipa dodow yi?” 6 Yesu bisaa Filipo saa asɛm yi de sɔɔ no hwɛe, efisɛ, na onim nea ɔbɛyɛ. 7 Filipo buae se, “Ansa na yebetumi ama saa nnipa dodow yi aduan no, ɛsɛ sɛ yenya sika a emu yɛ duru.”